Izilondolozi ZikaCarey Gillam - Ilungelo LaseMelika Lokukwazi
Imibuzo yoMhlangano Wabaninimasheya waseBayer, nguCarey Gillam
Posted on Mashi 30, 2020 by UStacy Malkan
Sicela usekele uphenyo lwethu lokudla ngokwenza umnikelo odonselwa intela namuhla.
Imibhalo yangaphakathi yeMonsanto ekhishwe ngo-2019 inikeza ukubukeka okungajwayelekile ngaphakathi kwezibulala-zinambuzane nezinkampani zokudla ezizama ukudicilela phansi amaqembu ezithakazelo zomphakathi nezintatheli. Imibhalo (ethunyelwe lapha) kukhombisa ukuthi iMonsanto nomnikazi wayo omusha, uBayer, babekhathazeke kakhulu nge-US Right to Know, iqembu labacwaningi elingenzi nzuzo elaqala ukuphenya imboni yezokudla ngo-2015. Idokhumenti yeMonsanto, "Uhlelo luka-USRTK luzoba nomthelela kuyo yonke imboni" futhi "lunamandla okulimaza kakhulu." Bheka ukufakwa ku-Guardian, "Kwembulwa: kanjani 'isikhungo sezobunhloli' sikaMonsanto sakhomba izintatheli kanye nezishoshovu. "
Kusukela kwethulwa ngo-2015, i-US Right to Know ithole amakhulu ezinkulungwane zamakhasi amadokhumende angaphakathi ezinkampani nawomthetho aveza ukuthi izinkampani zokudla nezibulala-zinambuzane zisebenza kanjani ekusithekeni ukuze zisebenzise isayensi, izifundiswa kanye nenqubomgomo yokwengeza inzuzo yazo ngokudla umphakathi impilo nemvelo. Umsebenzi wethu unikele kuya kwabathathu New York Times uphenyo, ayisishiyagalombili amaphepha ezifundo mayelana nomthelela ezinkampanini ohlelweni lwethu lokudla, futhi izindaba zomhlaba wonke ukubhala phansi ukuthi idlanzana lokudla okungenamsoco kanye nezinkampani zezibulala-zinambuzane zisebenzisa izindlela ezahlukahlukene ezingekho emthethweni futhi ezingalungile ukwenza uhlelo lokudla olungenampilo, olungasimami. Nayi eminye yemiphumela yethu ephezulu kuze kube manje.
1. Izifundiswa “ezizimele” ezixhaswa yiMonsanto ukukhuthaza nokunxenxa imikhiqizo yokubulala izinambuzane
I-US Right to Know ibhalwe phansi izibonelo eziningi zokuthi izinkampani zezibulala-zinambuzane zithembele kanjani kakhulu kwizifundiswa ezikhokhelwa umphakathi ukusiza nge-PR yazo nokunxenxa. Ikhasi lokuqala langoSepthemba 2015 New York Times i-athikili iveze ukuthi uMonsanto ubhalise izifundiswa, futhi wabakhokhela ngasese, ukuze baphikisane nemithetho yokulebula kwe-GMO. I-WBEZ kamuva yabika ngesibonelo esisodwa; indlela uprofesa waseYunivesithi yase-Illinois athola ngayo amashumi ezinkulungwane zamaRandi eMonsanto ukukhuthaza nokunxenxa ama-GMO kanye nezibulala-zinambuzane, kanti eyunivesithi yakhe yathola izigidi; azikho kulezi zimali ezidalulwe emphakathini.
Imibhalo ebikiwe kufayela le- Boston Globe, Bloomberg futhi umama Jones chaza ukuthi iMonsanto yabelwa kanjani, yabhalwa futhi yaphakanyiswa kanjani amaphepha e-pro-GMO avela konjiniyela baseHarvard, eCornell nakwamanye amanyuvesi - amaphepha ashicilelwe kungakhulunywa ngendima kaMonsanto. E-University of Saskatchewan, uMonsanto waqeqesha uprofesa futhi wahlela izindatshana zakhe zezifundo, ngokusho kuka amaphepha abikiwe by i-CBC. Ngokwesicelo senkampani ye-PR yomkhakha wezibulala-zinambuzane, uprofesa wase-University of Florida wakhiqiza i-video ehlose ukudicilela phansi isithunzi sensizwa yaseCanada eyayigxeka ama-GMO, ngokusho kwe imibhalo ebikwe yiGlobal News.
Bona wethu I-Pesticide Industry Propaganda Tracker amashidi eqiniso asuselwa kumadokhumenti aphenyo lwethu. Imibhalo eminingi ye-USRTK nayo ithunyelwe ku- Imitapo Yezincwadi Yezimboni Zokudla ne-Chemical USCF.
2. Iqembu lesayensi elingenzi nzuzo ILSI liqembu lezikhungo zokwamukela izinkampani zokudla nezokubulala izinambuzane
NgoSepthemba 2019, i- New York Times ibike nge "shadowy group group" i-International Life Sciences Institute (ILSI) ebumba inqubomgomo yokudla emhlabeni jikelele. Umbhalo weThe Times ucaphuna i- Ucwaningo lwe-2019 obhaliswe ngokuhlanganyela nguGary Ruskin we-USRTK ebika ukuthi i-ILSI isebenza kanjani njengeqembu lokungenela elithuthukisa intshisekelo yabaxhasi bayo bezimboni zokudla kanye nezezimboni. Bona ukumbozwa kwesifundo sethu ku iBMJ futhi I-Guardian, futhi ufunde kabanzi ngenhlangano iThe Times kuchazwe njengo “Iqembu elinamandla kunawo wonke embonini yokudla ongakaze uzwe” kithi Ishidi lamaqiniso le-ILSI.
Ngo-2017, uRuskin wabhala futhi i- umagazini ukubika ngama-imeyili abonisa abaholi bemboni yezokudla bexoxa ngokuthi “kumele basebenzise kanjani izinhlangano zangaphandle” lapho besebenza ngezingxabano mayelana nobungozi bezempilo kwimikhiqizo yabo. Ama-imeyili akhombisa abaholi abaphezulu embonini yezokudla bekhuthaza indlela ehlelekile yokuthonya ubufakazi besayensi, umbono wochwepheshe kanye nabalawuli emhlabeni jikelele. Bheka Ukusabalala kweBloomberg, “Ama-imeyili akhombisa ukuthi imboni yezokudla iyisebenzisa kanjani 'isayensi' ukuphusha i-soda.”
Uphenyo lwe-USRTK luye lwagqugquzela i- Indaba ka-2016 kuThe Guardian ebika ukuthi abaholi beqembu leJoint FAO / WHO elisuse i-glyphosate yokukhathazeka ngomdlavuza baphinde babamba izikhundla zobuholi e-ILSI, eyathola iminikelo emikhulu evela embonini yezibulala-zinambuzane.
3. Izindaba ezihamba phambili mayelana nokuhlolwa kweMonsanto Roundup kanye neDicamba
I-US Right to Know ivame ukuphula izindaba mayelana nokuhlolwa komdlavuza we-Roundup nge UCarey Gillam's Roundup noDicamba Trial Tracker, okunikeza ukubuka kuqala imibhalo yokutholwa, izingxoxo kanye namathiphu wezindaba mayelana nokuhlolwa. Bangaphezu kuka-42,000 abantu abafake isimangalo eNkampanini iMonsanto (manje ephethwe yiBayer) bethi ukutholakala kwe-Roundup herbicide kubangele bona noma abathandekayo babo ukuba bahlakulele i-non-Hodgkin lymphoma, nokuthi iMonsanto ihlanganise izingozi.
Njengengxenye yenqubo yokutholwa, iMonsanto iguqule izigidi zamakhasi wamarekhodi ayo angaphakathi. I-USRTK ithumela eminingi yale mibhalo namarekhodi asenkantolo mahhala kithi Amakhasi eMonsanto Papers.
Inqwaba yabalimi ezungeze i-United States nayo manje isimangalele iMonsanto Co yangaphambili kanye ne-congresserate BASF ngomzamo wokwenza izinkampani ziphendule izigidi zamahektare omonakalo wezitshalo abalimi abathi zibangelwa ukusetshenziswa okungekho emthethweni kokubulala ukhula kwamakhemikhali i-dicamba. Ngo-2020, saqala futhi ukuthumela i- Amaphepha eDicamba: Imibhalo ebalulekile nokuhlaziywa kusukela ekulingweni.
4. Izikhulu eziphezulu ze-CDC zasebenzisana neCoca-Cola ekubumbeni inkulumo-mpikiswano yokukhuluphala, futhi zeluleka uCoca-Cola ngokuthi angavimba kanjani i-WHO ekulweni noshukela ongeziwe
Imibhalo etholwe yi-US Right to Know yaholela komunye ikhasi lokuqala leNew York Times indaba ngonyaka we-2017 ebika ukuthi umqondisi osanda kuqokwa weSikhungo Sokulawulwa Kwezifo e-US, uBrenda Fitzgerald, wabona uCoca-Cola njengobambisene naye ezindabeni zokukhuluphala (uFitzgerald usesulile esikhundleni sakhe).
I-USRTK futhi yaba ngowokuqala ukubika ngo-2016 ukuthi esinye isikhulu esisezingeni eliphezulu se-CDC sasinobudlelwano obuhle neCoke, futhi sazama ukusiza inkampani ekuqondiseni i-World Health Organisation kude nemizamo yayo yokunqanda ukusetshenziswa koshukela ongeziwe; bheka kubika nguCarey Gillam, umqondisi wezocwaningo wase-US Right to Know. Umsebenzi wethu uphinde waba nomthelela ocwaningweni olwenziwe ngokubhalwa nguMilbank Quarterly nguGary Ruskin ochaza izingxoxo phakathi kwabaphathi beCDC nabakwaCoca-Cola. Okubili izihloko in iBMJ ngokuya ngemibhalo ye-USRTK, nama-athikili ku- Washington Post, Atlanta Journal Umthethosisekelo, ISan Diego Union Tribune, Forbes, CNN, I-Politico futhi I-Intercept nikeza imininingwane eyengeziwe ngethonya likaCoke e-ejensi yezempilo yomphakathi yase-US okufanele isize ukuvimbela ukukhuluphala, uhlobo lwesibili sikashukela nezinye izifo.
5. I-US FDA yathola izinsalela ze-glyphosate kuzinyosi, okusanhlamvu kwezinsana, nokunye ukudla okuvamile, yabe isiyeka ukuhlola ikhemikhali
I-FDA ayikhiphanga imininingwane, ngakho-ke i-USRTK iyenzile.
UCarey Gillam uqhamuke nezindaba ku Huffington Post, The Guardian futhi USRTK mayelana nemibhalo kahulumeni yangaphakathi etholwe ngezicelo ze-Freedom of Information Act ekhombisa ukuthi i-US FDA yenza izivivinyo ezithola i-glyphosate yokubulala ukhula ngokudla okuvame ukusetshenziswa kakhulu okubandakanya i-granola, ama-crackers, okusanhlamvu kwezinsana kanye namazinga aphezulu kakhulu kuju. I-FDA ayikhiphanga imininingwane, ngakho-ke i-USRTK iyenzile. Uhulumeni wabe esemisa uhlelo lwakhe lokuhlola izinsalela ze-glyphosate ekudleni, Kubike uGillam.
I-FDA iphinde yaqala ukuhlolwa futhi ngasekupheleni kuka-2018 futhi yakhipha umbiko okhombise ukuhlolwa okulinganiselwe kakhulu futhi yangabika amazinga akhathazayo e-glyphosate. Umbiko awufakanga noma yiluphi ulwazi i-USRTK etholakale ngama-FOIAs.
6. Izinkampani ezibulala izinambuzane zazixhasa ngasese iqembu lezemfundo elalihlasela imboni yezinto eziphilayo
Iqembu elizibiza ngokuthi yi-Academics Review laba sematheni ngo-2014 ngombiko ohlasela imboni yezimboni njengomkhonyovu wokumaketha. Leli qembu lathi liphethwe yizifundiswa ezizimele, futhi alizange lamukele iminikelo yenkampani; kodwa, imibhalo etholwe yi-USRTK futhi wabika ku Huffington Post uveze ukuthi leli qembu lasungulwa ngosizo lweMonsanto ukuze kube yiqembu eliphambili elixhaswe ngezimboni elingahlambalaza abagxeki bamaGMO kanye nezibulala-zinambuzane.
Amarekhodi entela akhombisa ukuthi i-Academics Review ithole iningi lezimali zayo kuMkhandlu we-Biotechnology Information (CBI), iqembu lokuhweba elixhaswe yizinkampani ezinkulu kakhulu zokubulala izinambuzane emhlabeni.
7. Amanyuvesi abambe izingqungquthela ezixhaswe imboni yezibulala-zinambuzane ukuqeqesha ososayensi nezintatheli ukuthi zingagqugquzela kanjani ama-GMO kanye nezibulala-zinambuzane
Imboni yezibulala-zinambuzane exhaswe ngemali ebanjelwe eNyuvesi yaseFlorida naseYunivesithi yaseCalifornia, uDavis wahlanganisa ososayensi, izintatheli nababambisene nomkhakha we-PR ukuxoxa ngendlelaxhuma ngokomzwelo nabazali abangabazayo”Ekuthumeleni kwabo imiyalezo ukukhuthaza ama-GMO kanye nezibulala-zinambuzane, ngokusho kuka imibhalo etholwe yi-US Right to Know.
Amaqembu amabili embonini, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project futhi Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, wahlela imicimbi yokuqeqesha imiyalezo, futhi wathi uxhaso luqhamuka emithonjeni kahulumeni, eyezemfundo neyemboni; kodwa, ngokusho kokubika ku-Okuqhubekayo, imithombo engeyona eyemboni yenqabile ukuxhasa ngezimali imicimbi futhi okuwukuphela komthombo olandelwayo wezimali kwakuyiqembu lezimboni zezibulala-zinambuzane i-CBI, elachitha imali engaphezu kwamaRandi ayizigidi ezingama-300,000 kulezi zingqungquthela zombili.
8. UCoca-Cola wazama ngasese ukuthonya izintatheli zezokwelapha nezesayensi
Imibhalo etholwe yi-US Right to Know futhi kubika iBMJ khombisa ukuthi iCoca-Cola yaxhasa kanjani izingqungquthela zobuntatheli eyunivesithi yase-US ngemizamo yokwakha izindaba ezinhle zeziphuzo ezinoshukela. Lapho bephonswa inselelo mayelana nokuxhaswa ngochungechunge lwezingqungquthela, izifundiswa ezithintekayo bezingenalo iqiniso ngokubandakanyeka kwemboni.
9. ICoca Cola yazibona “isempini” nomphakathi wezempilo womphakathi ngenxa yokukhuluphala
Enye indatshana eyabhalwa nguGary Ruskin wase-USRTK ku Ijenali ye-Epidemiology kanye neMpilo Yomphakathi wembula ukuthi uCoca-Cola uzibona kanjani “esempini” “nomphakathi wezempilo womphakathi.” Ama-imeyili abuye aveze imicabango yenkampani yokuthi ingabhekana kanjani nezinkinga eziphathelene nokukhuluphala nokuzibophezela kule nkinga yezempilo yomphakathi; ukuthola okuningi bheka indatshana kaRuskin ku Izindaba Zempilo Yezemvelo nezinye izindatshana zephephabhuku ezibhalwe ngokuhlanganyela yi-USRTK ku ikhasi lethu Lomsebenzi Wezemfundo.
10. Inqwaba yezifundiswa nezinye izimboni ezixhumene nazo zixhumanisa imiyalezo yazo nezinkampani ze-agrichemical kanye nama-PR operatives abo
Imibhalo etholwe yi-US Right to Know iveza amaqiniso angakaze abikwe ngaphambili ngamaqembu angaphambili, izifundiswa, kanye nabanye abahlanganyeli bezinkampani zokubulala izinambuzane kanye nezokudla abathembele kuzo ukukhuthaza ubudlelwane babo bomphakathi kanye nezinhlelo zokunxenxa. I-USRTK inikeza imininingwane eningiliziwe yamaphepha mayelana nabalingani abangaphezulu kweshumi nambili abahola eceleni ababonakala bezimele, kepha basebenza eduze nezinkampani kanye namafemu abo e-PR kwimilayezo ehlanganisiwe ye-pro-industry. Bona iphepha lethu lamaqiniso, Ukulandelela i-Agrichemical Industry Propaganda Network.
Sisize ukugcina uphenyo lwe-USRTK lupheka! Manje usungaba negalelo ekuphenyweni kwethu ngokusebenzisa I-Patreon futhi PayPal. Ngiyacela ubhalisele iphephandaba lethu ukuthola izibuyekezo ezijwayelekile mayelana nokutholakele kwethu futhi usijoyine Instagram, Facebook futhi Twitter ukuthola ingxoxo eyengeziwe ngohlelo lwethu lokudla.
Umsebenzi Wezemfundo, Ukudla Okucatshangwayo, Izifo Ezihlobene Nokudla, I-GMO, Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane, Abathandekayo Bayer, UCarey Gillam, UGary Ruskin, Monsanto, I-US Ilungelo Lokwazi, USRTK
Ungathini kuBayer emhlanganweni wabaninimasheya waminyaka yonke?
Posted on February 18, 2020 by UStacy Malkan
UPDATE: Sibonga bonke abafake isandla esikhwameni sethu sezokuvakasha ukuthumela uzakwethu uCarey Gillam eBonn, eJalimane, ukuhambela umhlangano wabanikazi bamasheya weBayer ngo-Ephreli 28. Sifinyelele inhloso yethu yokuqongelela imali ezinsukwini ezinhlanu nabanikeli abangaphezu kwamashumi amabili nambili kufaka phakathi umnikelo omkhulu flier amamayela. Hlala ubheke ukubika kukaCarey okuvela kwaBonn.
Uzakwethu uCarey Gillam, umqondisi wezocwaningo wase-US Right to Know, unikezwe ithuba lokukhuluma yiqembu labaninimasheya beBayer emhlanganweni wonyaka wenkampani ozayo eBonn, eJalimane. I- Umhlangano ka-Ephreli 28 kulindeleke ukuthi imbozwe kabanzi ngabezindaba zomhlaba wonke futhi izobhekwa kakhulu ngabatshalizimali, abenzi benqubomgomo nabanye abaholi bezinkampani.
Ungasisiza ukuthi sifinyelele uCarey eBonn? I-US Right to Know yenza isicelo esikhethekile sokuxhaswa ngezimali zokukhokhela ezokuthutha nendawo yokuhlala yalolu hambo olungalindelekile esingenalo kwisabelomali sethu. Uma unganikela, noma yiliphi inani liyasiza. Ungenza umnikelo odonswa ngentela lapha: https://usrtk.org/donate
Futhi sicela usithumelele imicabango yakho ngalokho okufanele sikutshele iBayer! Ungathumela i-imeyili kuCarey ngqo ku-carey@usrtk.org noma thumela imibono ku-Facebook lapha.
Bhalisela iphephandaba lethu ukwamukela izindaba ezivela kuphenyo lwe-US Right to Know.
Landela ukubikwa kukaCarey mayelana necala leRoundup kufayela le- I-Monsanto Roundup Trial Tracker.
izibulala-zinambuzane umhlangano wabanini bamasheya we-bayer, UCarey Gillam, I-US Ilungelo Lokwazi
Imibono Yesipho: Izincwadi ezihamba phambili ze-2019 nama-Movie Mayelana Nesistimu Yethu Yokudla
Posted on December 17, 2019 by UStacy Malkan
Uma uthanda ukunika abangani nomndeni isipho solwazi ngokudla kwethu, silapha ngezincomo zezincwadi nama-movie ka-2019 akhanyisa izingqinamba eziseduze nezinhliziyo zethu. E-US Right to Know, sikholelwa ukuthi ukwenza izinto obala - ezimakethe nakwezepolitiki - kubalulekile ekwakheni uhlelo lokudla okunempilo lwezingane zethu, imindeni yethu kanye nomhlaba wethu. I-Kudos kwizintatheli nabenzi bamafilimu abadalula ukuthi izintshisekelo ezinamandla zokudla nezimboni zamakhemikhali ziyithinta kanjani impilo yethu kanye nemvelo.
Nazi izincomo zethu zezincwadi zokudla nezama-movie ezihamba phambili. Ungathola futhi ikhophi esayiniwe yencwadi ewine imiklomelo yango-2017 nguzakwethu, uCarey Gillam, I-Whitewash: Indaba Yombulali Wokhula, Umdlavuza Nenkohlakalo Yesayensi, ngenyanga umnikelo wesondlo ku-US Right to Know ngo-Patreon, noma ungakwazi nikela ngqo ku-USRTK lapha.
Ukudla Kusasa: Ibhizinisi lezolimo, Abalimi Bomndeni, kanye neMpi Yekusasa Lokudla
NguTimothy A. Wise, I-New Press
"Kungenzeka aqale isiphepho emikhakheni yezolimo nentuthuko"
ye-Scholar UThimothewu A. Ohlakaniphile, kukhombisa ukuthi umhlaba usuvele unamathuluzi okuzondla ngokwawo, ngaphandle kokunweba ezolimo zezimboni noma ukwamukela imbewu eguqulwe izakhi zofuzo. Ukubika okuvela e-Afrika, eMexico, e-India nase-United States, uWise uchaza imininingwane ngokuthi ibhizinisi lezolimo kanye nabagqugquzeli balo abasiza umphakathi kudunwe izinqubomgomo zokudla ukondla izintshisekelo zebhizinisi, futhi uthi izinqubomgomo eziphakanyiswe yiGates Foundation exhaswa ngemali yi-Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) ukwehluleka ukuletha umkhiqizo nokuthuthukiswa kwemali engenayo kubalimi abasafufusa e-Afrika. UWise uphinde ahambise abafundi ezigodini ezikude ukuze babone ukuthi abalimi bayakha kanjani inhlabathi ngemikhuba ezwakalayo ngokwemvelo ngaphandle kwamakhemikhali noma i-hybrid engenisiwe noma imbewu eyenziwe ngofuzo.
“Amakhulu ezigidigidi zamadola asetshenziselwe ukuxhasa umanyolo kanye nenzalo yezinhlamvu ezihlanganisiwe okwenziwe yiKenya namanye amazwe ase-Afrika eminyakeni embalwa edlule sekuphelile, kusho incwadi entsha,” kubhala uJulius Segei ephephandabeni elizimele laseKenya, i Isizwe Semihla ngemihla. "Isinqumo sesazi sokuthi abukho ubufakazi obuncane bokuthi kukhona uguquko oluhlaza oluza e-Afrika eminyakeni engaphezu kweyishumi ngemuva kokuthi i-AGRA kungenzeka ihlasele isiphepho emikhakheni yezolimo nentuthuko."
Ukunqoba Kokungabaza: Imali Emnyama kanye neSayensi Yenkohliso
NguDavid Michaels, I-Oxford University Press (iyatholakala ngoJanuwari 2020)
Incwadi entsha kaDavid Michaels inikeza umbono wangaphakathi wokuthi izinkampani zikwenza kanjani ukungabaza kwezesayensi: izifundo mbumbulu, ubufakazi benhlangano, imibhalo yenqubomgomo yamatangi okucabanga, nokuningi. Uhlinzeka ngemininingwane emisha yamacala aphezulu abandakanya ukukhiqizwa kwezimoto, imidlalo yezobuchwepheshe, ukudla esikudlayo nomoya esiwuphefumulayo. UMichaels, owayenguMsizi kaNobhala Wezabasebenzi ngaphansi kukaMongameli uBarack Obama, ubhala ukuthi izinqubomgomo ezilwa nesayensi zeTrump Administration azizintsha, kepha kunalokho imiphumela yemikhankaso ethathe amashumi eminyaka yezimboni zikagwayi nezimbiwa ezimbiwa phansi zokunqanda ukulawulwa kwemikhiqizo ebulalayo . "Le ncwadi ibhalelwe ukukuthukuthelisa ngokwanele ukuba ufune ukufunda ukuthi ungazivikela kanjani, uvikele imiphakathi yakho kanye neplanethi yethu esengozini," kubhala ummeli wabathengi uRalph Nader. "Mayikubambe ekubambeni nasekuphikiseni."
Amanzi Amnyama, isici sefilimu kumatiyetha manje, lapho kudlala khona Mark Ruffalo, (isixhumanisi se-trailer)
Amanzi Amnyama aguqulwe kusuka kulo 2016 I-New York Times nguNathaniel Rich
Ummeli oqinile, URob Billott, wembula imfihlo emnyama exhumanisa inani elandayo lokufa okungaqondakali kwenye yezinkampani ezinkulu emhlabeni. Njengoba ifilimu ikhombisa, iDuPont ibibazi ubungozi bezithako zayo zeTeflon iminyaka eminingi. Ngenkathi ezama ukudalula iqiniso, kungekudala uBilot uzithola ebeka engcupheni ikusasa lakhe, umndeni wakhe kanye nempilo yakhe.
Kulezi zinhlobo zama-movie, "uyazi ukuthi uzobona indaba yokuthi izinto zimbi kangakanani ngenxa yethonya lezinkampani kuhulumeni kanye nakwezomnotho," kubhala umgxeki wama-movie uRoger Ebert, “Kodwa izinga lenkohlakalo lisashaqisa, kugqamisa umbuzo ocacile: kungani silwa, uma abantu ababi sebenqobile? Impendulo-ke ukuthi kufanele ulwe ngoba kuyinto efanele ukwenziwa. ” I-Dark Waters “iwumshini osebenzayo wokuthukuthela,” kubhala uMichael O'Sullivan eWashington Post, kodwa ibhayisikobho “ayifisi ukuba yinto okungeyona. NjengoBilott uqobo, wenza umsebenzi, hhayi ngokubukisa, kodwa ngokubeka amaqiniso. ”
Ukudla Kwezingane: Inselelo Yokondla Izingane Emhlabeni Ocutshungulwa Kakhulu
NguBettina Elias Siegel, I-Oxford University Press
UBetina Elias Siegel, izwi elihamba phambili ekudleni kwezingane, lihlaziya ngokuhlolisisa ukuthi isiko lokudla laseMelika lixhaphaza kanjani izingane futhi lidukisa abazali. I-Siegel idalula izindlela zokwakha izimboni zokudla zokumaketha ngqo ezinganeni futhi iqinisekise abazali ukuthi imikhiqizo esetshenzwe kakhulu "inempilo." Uhlinzeka kabanzi ngezinhlelo zaseMelika zokudla ezikoleni - kufaka phakathi ukuthi kungani, noma ngemuva kwezinguquko zesikhathi sika-Obama, ukudla ezikoleni kusalokhu kulawulwa ukudla okucutshungulwayo, iningi lazo liphethe izimpawu zokuthengisa ezithandwayo zokudla okungenamsoco. "Lo ngumbhalo obhalwe phansi, osuka enhliziyweni futhi ophoqelela kakhulu ukuthi kungani kumele senze kangcono ekunikezeni izingane zethu ukudla okunempilo ekhaya, ezikoleni, nasenkundleni yebhola likanobhutshuzwayo," Kubhala uMarion Nestle, uprofesa wezokudla, izifundo zokudla kanye nempilo yomphakathi eNew York University. "Kufanele kusikhuthaze sonke ukuthi sibe matasa futhi siqale ukukhuthaza izinqubomgomo ezingcono zokudla kwezingane - njengamanje."
Kushintshiwe: Uhambo lomthandi wokudla oluya kuma-GMO
Ngu-Aube Giroux, idokhumentari yobude besici isiyatholakala ukuthi ithengwe noma iqashwe ku-inthanethi
Kule dokhumentari enhle, ehambayo, ewine imiklomelo, umenzi wefilimu u-Aube Giroux nonina baqala uhambo lokuphenya ukuze bathole ukuthi kungani ama-GMO engafakwanga ilebula emikhiqizweni yokudla e-United States naseCanada, yize ebhalwe emazweni angama-64 emhlabeni jikelele. Ifaka ezomuntu siqu nezombusazwe, ifilimu igxile ebudlelwaneni bomenzi wefilimu nonina, umlimi wasengadini kanye nesishoshovu sokudla esalwa nomdlavuza ngesikhathi kwenziwa ifilimu. Kushukunyiswa uthando lwabo oluhlanganyelwe lokudla, ithimba lomama nendodakazi lithola ukuthi imboni yezamabhizinisi ezolimo ilawula kangakanani izinqubomgomo zethu zokudla, futhi yenza icala eliqinile lohlelo lokudla olusobala nolusimeme. Owinile ama-Audience Favorite Awards amane kanye ne-2019 James Beard Foundation Broadcast Media Award ye-documentary ehamba phambili, i-Modified is “muhle ngaphandle kwamagama… uyaphoqelela futhi unozwela, ”Kubhala intatheli uJoan Baxter.
Futhi le monde devint silencieux: Beka amazwana ku-détruit les insectes
Futhi Umhlaba Wathula: I-Agrochemistry Yabhubhisa Kanjani Izinambuzane
nguStéphane Foucart, Ama-editions du Seuil (ngesiFulentshi)
Intatheli ephenyayo UStephane Foucart Imininingwane yokuthi imboni yezolimo yahlela kanjani "inhlekelele enkulu kakhulu yemvelo ekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili nanye" - ukuwa kwezinambuzane. Yize izinkampani zezibulala-zinambuzane zithi ukunyamalala kwezinambuzane kuyindida ngenxa yezici eziningi, i-Foucart ibika ukuthi imbangela enkulu ukusetshenziswa okukhulu kwezibulala-zinambuzane ze-neonicotinoid, futhi kukhombisa ukuthi kwenziwa kanjani ukuthi kube nemboni eyenza inkulumompikiswano yomphakathi ngokusebenzisa isayensi, umthethonqubo kanye ubuchwepheshe. Le ncwadi ikhombisa ukuthi le mboni yaxhaphaza kanjani isayensi kwaze kwaba seqophelweni lokuthi “isenze sikhohlwe ukuthi ama-insecticide… abulala izinambuzane,” kubhala u-Annabelle Martella eLa Croix (ukubuyekeza ngesiFulentshi).
UFoucart uwine i-2018 European Press Prize yokubika ngophenyo, kanye noStéphane Horel, wabo Amaphepha eMonsanto (ahunyushelwe esiNgisini lapha) izindatshana ezimayelana nokuthi isayensi isetshenziswe kanjani yiMonsanto, ithonye kanjani inqubo yokulawula futhi yahlela imikhankaso ye-PR yokuvikela ukuvikela ukhula lwayo lweRoundup.
UWilted: Amagciwane, Amakhemikhali, kanye neFuture future of the Strawberry Industry
NguJulie Guthman, I-University of California Press
UJulie Guthman ulandisa indaba yokuthi ama-strawberry - isivuno sesithupha esinezinga eliphakeme kunazo zonke eCalifornia esikhiqiza amaphesenti angama-88 amajikijolo owathandayo esizweni - athembele ezintuthweni ezinobuthi ezinobuthi kakhulu, nokuthi ukuthembela lokho kwagcizelela kanjani kulo lonke uhlelo lokukhiqiza izithelo. Izimo ezithile zezitshalo, inhlabathi, amakhemikhali, isimo sezulu, kanye nemizimba yokusebenza ebikade yenza ukukhiqizwa kwama-sitrobheli kube yinzuzo kangaka eGolden State manje seyishintshile futhi yaba yisethi yezinsongo ezihlobene ezifaka ikusasa lemboni engcupheni. "Isimo esibucayi embonini yama-sitrobheli siyisibonelo esisodwa sendlela isu lethu lokulawula izinhlelo zemvelo nokugxila ekukhuphukeni kokukhishwa kwemali ngazo zonke izindlela libukeka kancane, ngokuncipha kwembuyiselo," kubhala u-Emily Monosson kwiphephandaba. Ukubuyekezwa komagazini weSayensi. "Imizamo yakamuva yokusebenza nezinhlelo zemvelo kunokuphikisana nezinhlelo zemvelo iphakamisa indlela eya phambili."
Ama-GMO aKhethiwe: Umbono Wokungabaza Ngokudla Okushintshwe Ngokofuzo
NguSheldon Krimsky, Cindezela MIT
UProfessor Sheldon Krimsky uhlola ukukhathazeka kwezempilo nokuphepha, izingqinamba zezemvelo, imiphumela yendlala emhlabeni, kanye nokuntuleka kokuvumelana kwesayensi ngamaGMO (izidalwa eziguqulwe izakhi zofuzo). Uhlola imibono yezinhlobo ezahlukahlukene zokungabaza nge-GMO, kusuka emaqenjini abamele umphakathi kanye nezinhlangano ezingekho ngaphansi kukahulumeni kuye kososayensi abanemibono engafani ngobungozi nomthelela kwezemvelo. Abashicileli Masonto onke babiza incwadi kaKrimsky “incwadi engachemile, efundisayo” “ebeka 'izimangalo eziphikisayo neziphikisayo,' ifakazela isayensi, futhi ikhombisa lapho kunokuvumelana khona, ukungavumelani okuqotho, noma ukungaqiniseki okungaxazululiwe.” UProfesa we-NYU uMarion Nestle uchaza le ncwadi "njengesipho kunoma ngubani odidekile" ngama-GMO.
Futhi izincwadi ezimbili zokudla ezinhle kakhulu ezivela ku-2018
Imbewu Yokumelana: Impi Yokonga Ukuhlinzekwa Kwethu Kokudla
NguMark Schapiro, Ukushicilelwa kwe-Skyhorse
intatheli UMark Schapiro ibika ngempi esezingeni eliphezulu eqhubekayo yokulawulwa kwembewu yomhlaba, njengoba ukushintsha kwesimo sezulu kusongela ukuvikeleka kokuphakelwa kwethu kokudla. USchapiro uphenya ukuthi kusho ukuthini ukuthi ngaphezu kwengxenye yembewu yezentengiselwano yomhlaba iphethwe yizinkampani zamakhemikhali ezintathu zamazwe omhlaba, futhi ukuveza obala lokho ukuklinywa kwenkampani okwenzayo ekudleni kwethu kwansuku zonke - kusukela ekuqhumeni kokudla okushintshwe izakhi zofuzo, kuya ekunyamalaleni okusheshayo kwesitshalo izinhlobonhlobo, ekuqedeni abalimi abazimele asebenesikhathi eside bemba ukudla kwethu. Le ncwadi ibuye ibhale izindaba ezimibalabala nezimangazayo ezivela enhlanganweni yomhlaba edelela lezi zinkampani, futhi inikeze ezinye izindlela ezikwazi ukusinda ezinguqukweni zezulu ezisheshayo. “Imbewu Yokumelana nayo iwukuvuka,” kubhala u-Alice Waters, umsunguli weChez Panisse kanye ne-Edible Schoolyard. "Ngezindaba ezicacile nezingasoze zalibaleka, uMark Schapiro usitshela ukuthi imbewu ihamba kanjani phambili empini yethu yokudla okunempilo."
Phambilini Bekwaziwa Ukudla: Indlela Uhlelo Lokudla Lwezimboni Oluguqula Ngayo Imicabango, Imizimba Namasiko
NguKristin Lawless, Iphephandaba iSt Martin's Press
Uma ucabanga ukuthi ukuthenga okuphilayo kwi-Whole Foods kukuvikela, wenza iphutha. Ukudla kwethu — ngisho noma sitshelwa ukuthi kusilungele — kushintshe kwaba kubi kakhulu eminyakeni eyikhulu eyedlule, okuqukethwe kokudla okunomsoco konakala ngenxa yokulima kwezimboni nokwakheka kwaso kuguquliwe ngenxa yokwengezwa kwezinkulungwane zamakhemikhali asuka emithini yokubulala izinambuzane eya emaphaketheni. Simane nje asisakwazi ukuthi sidlani. Ku- Phambilini Kwaziwa Ngokudla, UKristin ongenamthetho uphikisa ngokuthi, ngenxa yokwehla kokudla kwethu, imizimba yethu ishintsha ngokoqobo kusuka ngaphakathi kuya ngaphandle. Imboni yokudla eyizigidigidi ibumba kabusha ukudla esikuthandayo, iguqula ubuchopho bethu, iguqule ukwakheka kwe-microbiota yethu, futhi ithinte nokuvezwa kwezakhi zethu zofuzo.
Umbhali uNaomi Klein uyabhala: “Kulolu cwaningo olwembuliwe lwezingozi zohlelo lokudla ezimbonini, abakwa-Lawless banikela ngamathuluzi abalulekile okukuhambisa ngokuphepha. "Abangcono kakhulu abahlangene nezeluleko zokuthenga: usicela ukuba sicabange ngokuphelele ngokudla, ukuthi kungani kungahlukaniswa neminye imizabalazo yezobulungiswa, nokuthi kusho ukuthini ukufuna ushintsho oluguqulayo."
Ukudla Okucatshangwayo Aube Giroux, UBetina Elias Siegel, UCarey Gillam, Amanzi Amnyama, UDavid Michaels, Ukudla Kusasa, Phambilini Kwaziwa Ngokudla, Ama-GMO akhishiwe, UJulie Guthman, Ukudla Kwezingane, UKristin ongenamthetho, Mark Ruffalo, UMark Schapiro, Modified, Nathaniel Rich, URob Bilot, Imbewu Yokumelana, USheldon Krimsky, UStephane Foucart, Ukunqoba Kokungabaza, UThimothewu A. Ohlakaniphile, Izincomo zencwadi ye-USRTK, I-Whitewash, UWilted
NgiyiNtatheli. IMonsanto Yakhele Isu Lokucekela Phansi Idumela Lami
Posted on September 9, 2019 by UStacy Malkan
Le ndaba ekuqaleni yangena The Guardian ngo-Agasti 9, 2019
Njengentatheli esehlanganise izindaba zezinkampani zaseMelika iminyaka engaphezu kwengu-30, kuncane kakhulu okungithusayo mayelana nezinkampani zamasu ezinkulumo-ze ezivame ukuzisebenzisa. Ngiyazi ukuthi izinkampani zengcindezi zingenza futhi zizilethe lapho zizama ukwenza ukwembozwa okuhle futhi zikhawulele ekubikeni ezikubona kukubi ngazo imikhuba yebhizinisi nemikhiqizo.
Kepha ngenkathi ngisanda kuthola amakhasi acishe abe ngu-50 wokuxhumana kwangaphakathi kweMonsanto mayelana nezinhlelo zenkampani zokungihlasela kanye nedumela lami, ngashaqeka.
Ngangazi ukuthi inkampani ayithandi iqiniso lokuthi eminyakeni yami engama-21 yokubika ngomkhakha we-agrochemical - ikakhulukazi iReuters - ngabhala izindaba ezazicaphuna abagxeki kanye nabalandeli bezimbewu ezakhiwe ngofuzo zikaMonsanto. Ngangazi ukuthi inkampani yayingangithandi ukuthi ngibike ngokungakhuli kahle emphakathini wesayensi maqondana nocwaningo oluxhuma ukubulala ukhula kweMonsanto ezinkingeni zezempilo zabantu nezemvelo. Futhi bengazi ukuthi inkampani ayikwamukelanga ukukhishwa kwencwadi yami ngo-2017, I-Whitewash - Indaba Yombulali Wokhula, Umdlavuza Nenkohlakalo Yesayensi, okuveze okwenziwe yinkampani ukucindezela nokusebenzisa isayensi ezungeze ibhizinisi layo lokubulala ukhula.
Kodwa angikaze ngiphuphe ukuthi ngizoqinisekisa uhlelo lwami lokusebenza lweMonsanto…
Udaba oluphelele kwiThe Guardian: “Ngiyintatheli: IMonsanto yakha isu-sinyathelo nesinyathelo sokucekela phansi isithunzi sami. "
Bheka imibhalo eveza umkhankaso kaMonsanto ukudicilela phansi isithunzi somsebenzi kaGillam kanye nophenyo olwenziwe yi-US Right to Know mayelana nezinkampani ezenza ibhizinisi.
UCarey Gillam ungumqondisi wezocwaningo wase-US Right to Know, iqembu labacwaningi elingenzi nzuzo eliphenya imboni yokudla. UGillam ubengumbhali wezwe weReuters lapho echithe khona iminyaka eyi-17 ehlanganisa ibhizinisi lezolimo, futhi uhlala ejwayelekile umlobeli wephephandaba eThe Guardian.
izibulala-zinambuzane Bayer, UCarey Gillam, Monsanto, The Guardian, I-Whitewash
Posted on September 8, 2019 by UStacy Malkan
Sisize ukuqhubeka nokumba amadokhumenti izinkampani ezinkulu kunazo zonke emhlabeni zezibulala-zinambuzane kanye ne-biotech ezingafuni ukuthi ubone nge umnikelo odonselwa intela.
UMonsanto wayekhathazeke kakhulu ngophenyo lwe-FOIA lomqondisi we-USRTK Co, futhi waba nohlelo olunzulu lokulwa nalo.
IMonsanto ibhekisa kaningi ekusebenzeni nabantu besithathu ukulwa ne-USRTK.
Ukudla Okucatshangwayo, Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane UCarey Gillam, FOIA, UGary Ruskin, Izimpendulo ze-GMO, imboni / ukubambisana kwezemfundo, Monsanto, Neil Young, RoundUp, I-US Ilungelo Lokwazi, USRTK
I-EPA yenzelwe ukusivikela. Izilingo zeMonsanto ziphakamisa ukuthi akunjalo
Posted on Kwangathi 7, 2019 by UStacy Malkan
Uphenyo lwethu UCarey Gillam, glyphosate, Izilingo zeMonsanto, UNathan Donley, The Guardian
Ukuhlaziywa Okusha Kuphakamisa Imibuzo Ngokuhlukaniswa Kwe-Glyphosate kwe-EPA
Posted on January 14, 2019 by UStacy Malkan
Umcwaningi uthi i-EPA ibudedisile ubufakazi obuningi bokuthi lo mbulali odumile uhlobene nomdlavuza
Sekudlule isikhathi esingaphezu kwenyanga kuqulwe icala lokuqala lombuso mayelana nodaba lokuthi ababulali bokhula abathandwayo bakaMonsanto bangawudala yini umdlavuza, ukuhlaziywa okusha iphakamisa imibuzo ehluphayo ngokuphathwa kwe-US Environmental Protection Agency (EPA) ngesayensi efanelekile kwezokuphepha kwe-glyphosate.
Ngokwalo mbiko, ohlola izikhundla eziphikisayo ezithathwe yi-EPA kanye ne-ejensi yocwaningo lomdlavuza yamazwe omhlaba emithini yokubulala ukhula eglyphosate, i-EPA ibudedisile ubufakazi obuningi besayensi bokuthi i-genotoxicity ihlobene nemikhiqizo yokubulala ukhula efana neRoundup neminye imikhiqizo yaseMonsanto. I-Genotoxicity isho umthelela wento ebhubhisayo ezintweni zofuzo zeseli. Ama-genotoxin angadala ukuguquka kwamaseli angaholela kumdlavuza.
I-EPA ibeka i-glyphosate njengaleyo engeke ibe yisifo somdlavuza kuyilapho i-International Agency for Research on Cancer (IARC), eyingxenye yeWorld Health Organisation, ikubeka “njenge-carcinogenic.”
Leli phepha labhalwa nguCharles Benbrook, owayenguprofesa wezokucwaninga owake wasebenza njengomqondisi omkhulu webhodi leNational Academy of Sciences kwezolimo, futhi lashicilelwa ephephabhukwini Isayensi Yezemvelo Yurophu Ngomsombuluko. Kususelwa ekubuyekezweni kukaBenbrook kwamarekhodi e-EPA ne-IARC maqondana nezinhlobo nezinombolo zezifundo ze-glyphosate inhlangano ngayinye ehlolwe.
"Ngokusobala, uma kuqhathaniswa nokubuyekezwa kwe-EPA ye-genotoxicity, ukubuyekezwa kwe-IARC kusekelwe ezifundweni zakamuva, ezibucayi kakhulu, futhi eziyinkimbinkimbi ze-genotoxic, futhi kubonisa ngokunembile ukuvezwa komhlaba wangempela," kusho uBenbrook etshela i-EHN.
UBenbrook ufakaze njengofakazi oyingcweti ecaleni lokuqala lokuya ecaleni uMonsanto ngenxa yezimangalo zokubulala uketshezi lwe-glyphosate kubanga umdlavuza. Ummangali kuleso simo, uDewayne “Lee” Johnson, uzuze umklomelo wama-jury ngazwilinye kwezigidi ezingama- $ 289 ngonyaka owedlule lapho ijaji kuleli cala lehlise lafika ku- $ 78 million. Izinkulungwane zezisulu zomdlavuza ezingeziwe ziye zamangalela uMonsanto kanye ne Isivivinyo sesibili iqala ngoFebhuwari 25 enkantolo yenhlangano eSan Francisco. UBenbrook naye kulindeleke ukuthi afakaze ngommangali kulelo cala.
IMonsanto efuna ukukhipha ubufakazi bukaBenbrook ecaleni, ethi akanalo ulwazi kunoma iyiphi isayensi yomzimba noma umkhakha wezokwelapha futhi akaqeqeshwanga noma uneziqu zobuthi futhi akakaze asebenze e-EPA noma komunye umzimba olawulayo.
I-EPA ayiphendulanga esicelweni sokuphawula. I-ejensi igcinile, nokho, ukuthi ukubuyekezwa kwayo kwe-glyphosate kube namandla futhi kuphelele. IGlyphosate inobuthi obuphansi kubantu, futhi imikhiqizo ye-glyphosate ingasetshenziswa ngokuphepha ngokulandela izinkomba kumikhiqizo enelebula, ngokwe-EPA.
Ekuhlaziyweni okusha, uBenbrook ukugxeka ukubhekwa kwe-EPA ngama-glyphosate herbicides, ephawula ukuthi isisindo esincane sanikezwa ukucwaninga maqondana nokwakheka kwangempela okuthengiswe emakethe futhi kwasetshenziswa izigidi zabantu emhlabeni jikelele. Esikhundleni salokho, i-EPA kanye nezinye izilawuli zikhombe kakhulu kwizifundo eziningi ezikhokhelwe iMonsanto nezinye izinkampani ezithengisa imithi yokubulala ukhula ye-glyphosate engatholanga ukukhathazeka ngomdlavuza. I-EPA ayinakile kangako kumaphrojekthi amaningi azimele ocwaningo akhombisile ukuthi ukwakheka kungaba nobuthi ngaphezu kwe-glyphosate kuphela, ngokusho kukaBenbrook.
Ngempela, i-EPA yaqala ukusebenza ku-2016-eminyakeni engaba ngu-42 ngemuva kokufika kwemithi yokubulala ukhula yokuqala ye-glyphosate - ngohlelo lwe-US National Toxicology Program ukuhlola ubuthi bokuqhathanisa kokwakhiwa. Imiphumela yokuqala yadalulwa ngo-2018 isekela ukukhathazeka mayelana nobuthi obuthuthukisiwe ekwakhiweni.
Ososayensi abaningana, kufaka phakathi ngaphakathi kwama-EPA IHhovisi Lezokucwaninga Nentuthuko (ORD), futhi kusuka kuphaneli lochwepheshe besayensi ebizwe yi-EPA, ibalule ukusilela nezinkinga ngesinqumo se-EPA sokuhlukanisa i-glyphosate njengoba kungenzeki ukuthi ibe ngumdlavuza kubantu. Kepha ukuhlaziywa kukaBenbrook kungokokuqala ukubheka ngokujulile ukuthi kungani futhi kungani i-EPA ne-IARC badonsa iziphetho ezingafani.
UBenbrook ubheke izingcaphuno zezivivinyo ze-genotoxicity okuxoxwe ngazo emibikweni ye-EPA neye-IARC, zombili lezo ezashicilelwa emaphephandabeni abuyekezwa ngontanga kanye nalawo angashicilelwe anikezwa i-EPA nguMonsanto nezinye izinkampani.
Ezinye izifundo zabheka i-glyphosate yodwa, kanye / noma ukwakheka kwe-herbicide-based based glyphosate kanti okunye kwafaka okutholakele mayelana nento ebizwa nge-aminomethylphosphonic acid (AMPA), eyi-glyphosate's primary metabolite.
Ukuhlaziywa kukaBenbrook kutholile ukuthi ngaphakathi kobufakazi obutholakalayo, i-EPA ithembele ezifundweni eziyi-151, eziyi-115 zazo ezikhombise imiphumela engemihle, okusho ukuthi abukho ubufakazi be-genotoxicity, futhi yi-36 kuphela ebinemiphumela emihle. I-IARC icaphune izifundo eziyi-191, ezingama-45 kuphela ezikhombisa imiphumela emibi kwathi eziyi-146 zazo zakhombisa ubufakazi bokuthi i-genotoxicity.
I-IARC ithe ngaphakathi kwalezi zifundo okutholiwe "Ubufakazi obuqinile bokuthi ukutholakala kwe-glyphosate noma i-glyphosate-based formulations kuyi-genotoxic ...
Ukuhlaziywa kukaBenbrook kubika ukuthi kule minyaka emithathu edlule kuye kwashicilelwa okungenani izifundo ezingama-27 ezikhuluma ngezindlela ezingahle zenziwe nge-genotoxic ye-glyphosate kanye / noma eyakhelwe i-glyphosate-based herbicides futhi konke kodwa okunye kwezifundo ezingama-27 kubike umphumela owodwa noma eminingi emihle. Kwakunezindawo eziwu-18 ezinhle ezazivela ekulimaleni kwe-DNA, eziyisithupha ezihambisana nengcindezi ye-oxidative, kanti ezimbili zinezinye izindlela ze-genotoxicity, kusho iphepha lakhe.
Ngokusho kukaBenbrook, ukwehluleka kwe-EPA ukugxila emithini yokubulala ukhula eyenziwe nge-glyphosate kuyingozi ngoba lezi zinto "zibanga konke ukusetshenziswa kwezentengiselwano nokuvezwa kwabantu (ayikho imikhiqizo yokubulala ukhula equkethe nje i-glyphosate)."
Ucwaningo oluningi luyadingeka ekuvezweni komhlaba wangempela, kuphetha uBenbrook.
Ukuvuselelwa: Bheka futhi ukuhlelwa kwabahleli be-Environmental Sciences Europe mayelana nemiphumela yokuhlaziywa kukaBenbrook, “Okunye ukudla komcabango: ukuphawula okufishane ephepheni likaCharles Benbrook".
UCarey Gillam uyintatheli nombhali, futhi ungumcwaningi onentshisekelo yomphakathi ka Ilungelo le-US Lokwazi, iqembu lokucwaninga ngemboni yokudla elingenzi inzuzo. Mlandele ku-Twitter ku @sbahle_mpisane.
izibulala-zinambuzane umdlavuza, UCarey Gillam, UCharles Benbrook, Isayensi Yezemvelo Yurophu, EPA, genotoxicity, glyphosate, Monsanto, RoundUp
Ngiwine Icala Elingokomlando Kodwa Kungenzeka Ngingaphili Ukuthola Imali
Posted on November 26, 2018 by UStacy Malkan
Lo mbhalo ushicilelwe ekuqaleni ku Isikhathi Magazine.
UDewayne Anthony Lee Johnson ubelokhu ehamba nje ngoLee. Waphila impilo enesizotha iminyaka engama-42, futhi waphatheka kabi lapho ethola ukuthi unomdlavuza ongapheli ku-2014. Manje uneminyaka engama-46, njengoba elwa nokugula kwakhe okwakwanda, uJohnson uthole usaziwayo ngokuzuma ngokunqoba komunye wabanamandla kakhulu emhlabeni izinkampani ezinempikiswano - iMonsanto Co.
UJohnson wamangalela uMonsanto esola ukuthi waba nohlobo olubulalayo lwe-non-Hodgkin lymphoma ngemuva kokugcotshwa ngemithi yokubulala ukhula yenkampani, ayifafaza njengengxenye yomsebenzi wakhe njengomgcini wezinkundla zesikole. Ngo-Agasti 2018, ijaji eSan Francisco ngazwi linye lathola ukuthi iMonsanto yehlulekile ukuxwayisa ngobungozi be-carcinogenic yemithi yayo edumile ye-Roundup nemikhiqizo ehlobene nayo, uJohnson ayifutha njalo. Izinkulungwane zabanye abahlaselwa ngumdlavuza nazo zimangalela uMonsanto futhi zilinde usuku lwazo enkantolo, kodwa uJohnson waba ngowokuqala ukufaka le nkampani enkantolo. Ijaji linikeze uJohnson ishiya emhlathini i- $ 289 million, lapho ijaji lashaya imali engamaRandi ayizigidi ezingama- $ 78 ngo-Okthoba 22. Ubufakazi obudalulwe ecaleni buhlanganisa amarekhodi angaphakathi eMonsanto afaka phakathi izingxoxo zamaphepha "ezinto zokubhala ghost" eziqinisekisa ukuphepha kwemikhiqizo nezinhlelo zayo ukudicilela phansi i-ejensi yomhlaba wonke ememezele ukuthi isithako esiyinhloko ku-Roundup, ikhemikhali elibizwa ngokuthi i-glyphosate, ukuthi lingaba yisifo somdlavuza womuntu okungenzeka ukuthi sikhona.
IMonsanto, manje eseyiyunithi yeBayer AG, igcina ngokuthi imikhiqizo yayo ayibangeli umdlavuza. Ngomhla kaNovemba 20, inkampani yaqhubeka nokufaka isicelo, ifuna ukuguqula ngisho umklomelo kaJohnson owehlisiwe kanye nokwenqaba kwejaji lasenkantolo yecala ukunika isicelo sikaMonsanto secala elisha. Kepha isinqumo sokuqala besivele sibeka impilo kaJohnson emgudwini ohluke kakhulu, okumlethela ukunakekelwa kwamazwe omhlaba kanye nenhliziyo ebuhlungu. Ukhulume NESIKHATHI ngemiphumela yecala lakhe.
Ngaphambi kokuba ngigule impilo yayimnandi impela. Benginomsebenzi omuhle. Sasiqasha le ndlu enhle; sikuthole ngabangane abathile. Bekucishe kwavalwa ngakho-ke sikwazile ukuyiqasha ngentengo enhle. Amakamelo okulala amathathu negceke elikhulu elihle. Ngangingenayo imoto ngakho unkosikazi wami u-Araceli wayengishiya emsebenzini noma ngangihamba ngebhayisikili lami ngiye esitobhini sebhasi bese ngihamba ngebhasi ngiye emsebenzini. Isiqu sami somsebenzi esifundeni sesikole sasihlanganisiwe njengomphathi wezinambuzane, i-IPM. Ngenze konke - ngibambe izingcwecwe, amagundane, kanye nama-raccoon, ngifaka izimbotshana ezindongeni, ngasebenza ezindabeni zokunisela. Futhi ngafafaza izibulala-zinambuzane, "ujusi." Bekumele ngibe semsebenzini ngelanga kuze ngiqiniseke ukuthi sinesikhathi sokufafaza ngaphambi kokuba izingane zifike esikoleni. Omunye wabafana engangisebenza nabo wayengafuni ukugqoka izinto zokuzivikela kodwa ngamtshela ukuthi kumele akwenze. Kufanele uqaphele ngalezi zinto. Ngosuku olujwayelekile ngangigcwalisa isitsha sami esincane ngoketshezi lwe-pesticides oluhlaza bese ngikubeka ngemuva elolini lami bese ngixuba umthwalo ngaphambi kokuba ngiphume egcekeni. Ngangikuhlanganisa konke ethangini ngikuthathe ngemuva elolini lami bese ngiphuma ngiyoqala ukufafaza. Ngangingakuthandi ukusebenzisa amakhemikhali kodwa ngangiwuthanda lowo msebenzi. Ngabe ngenza u- $ 80,000 ngonyaka manje ukube ngangisekhona.
Ngalolo suku lwengozi, usuku okwaphuka ngalo isifutho futhi ngacwiliswa ujusi, angizange ngicabange kangako ngakho. Ngageza kusinki ngangokunokwenzeka ngashintsha izingubo zami. Kamuva ngaya ekhaya ngageza kahle kodwa angizange ngicabange, “Hawu nkosi yami, ngizokufa ngale nto.” Ngibe sengithola ukuqubuka okuncane. Bese kuba kubi kakhulu. Ngesinye isikhathi nganginezilonda ebusweni, ezindebeni, kuzo zonke izingalo nemilenze.
Lapho ngiqala ukubona udokotela wayedideke ngokuphelele futhi wayengazi ukuthi kwenzekani esikhunjeni sami. Ungithume ukuthi ngiyobona udokotela wesikhumba owenza i-biopsy yesilonda emadolweni. Bangithumela e-UCSF (University of California San Francisco) base beya eStanford. Kwafika inqwaba yodokotela bangihlola. Kwathi ngolunye usuku ngathola ucingo. Bangitshele ukuthi kuyaphuthuma, kufanele ngingene ukuzoxoxa ngemiphumela yami yokuhlolwa. Lapho udokotela ethi nginomdlavuza, umkami wayehlezi lapho nami. Waqala wakhala. Angiyingenisanga ngokushesha. Angicabangi ukuthi ngisayithathile.
Abantu bafuna ukusho ukuthi nguJohnson v. Monsanto. Bafuna ngikhulume ngenkampani. Angifuni ukwenza lokho. Angifuni ngisho nokusho igama lenkampani. Ngimane ngithi 'inkampani enkulu.' Angifuni ukunyundela. Sengiyibonile imibiko yokuthi ngifuna ukuxolisa kepha lokho akulona iqiniso. Angiyena umuntu ongacabanga ukuthi ukuxolisa kuzongenza ngizizwe ngingcono - nakanjani ngeke kuwulaphe umdlavuza wami. Lokhu akumayelana nami naleyo nkampani enkulu. Kubalulekile ukuthi abantu bazazi lezi zinto, bazi mayelana nokuthi bavezwa yini. Uma abantu benolwazi bangenza izinqumo, bangaziswa futhi bazivikele. Ngingumfana ojwayelekile nje ovela edolobhaneni elincane elibizwa ngeVallejo eCalifornia Bay Area okwenzeka ukuthi afune iqiniso ngempilo yami ebuthaka ngathola izimpendulo.
Akusho ukuthi angizange ngithukuthele. Ziningi izinto ezingicasulile njengoba ubufakazi buphuma enkantolo. Ngangifonele inkampani enkulu kusenesikhathi lapho ngigula ngizama ukuthola izimpendulo futhi ngaleso sikhathi owesifazane engangikhuluma naye ocingweni wayemuhle impela. Kepha uyabona kuma-imeyili aphume ukuthi empeleni bekungekho ukungikhathalela. Abazange baphinde bangishayele, lokho kwangithukuthelisa. Ngicabanga ukuthi ukungatholi ucingo emuva yikho okungenze ngalandela izinyathelo zomthetho. Bese kuthi lapho ngisenkantolo futhi ngezwa ngokubhalwa kwesipoki kwesayensi futhi ubona kuma-imeyili ukuthi wonke umuntu usembhalweni nje kuphela; bahlela wonke umuntu ukuthi anamathele kuskripthi mayelana nokuphepha noma ngabe isayensi isho okwehlukile. [Inothi loMhleli: Ama-imeyili angaphakathi eMonsanto alethwe ngesikhathi kuqulwa icala akhombisa ukuthi uJohnson wabiza inkampani ngoNovemba 2014 ebika ukukhathazeka kwakhe ngokuthi umdlavuza wakhe wabangelwa "ukumunzwa esikhunjeni" emuthini wokubulala ukhula weMonsanto ngesikhathi sengozi yomsebenzi. "Ufuna izimpendulo," uchwepheshe wokusekela umkhiqizo weMonsanto ubhalele uMonsanto Dan Goldstein, isayensi yezokwelapha yenkampani kanye nomphathi wokufinyelela. UGoldstein uphendule wathi "le ndaba ayizwakali nakancane kimi," futhi wathi uzobiza uJohnson. Kodwa uJohnson uthe akakaze athole ucingo kanti uGoldstein wethule ubufakazi wathi akasakhumbuli ukuthi wamshayela yini uJohnson noma cha.]
Kubukeka sengathi umhlaba wonke ubukele ngenkathi ijaji lifunda leso sinqumo, umugqa ngomugqa, base bememezela ukukhokhwa kwemali engama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ 289. Ngicabanga ukuthi ngokushesha ngangihlanya; Ngabuza ngokoqobo umsizi wesikhonzi senkantolo omncane ukuthi angakwazi yini ukuphuma nami enkantolo ngoba ngangazi ukuthi lokhu kuzonakwa futhi angikaze ngibe umlandeli wokunakwa noma we-fanfare. Futhi manje kubonakala sengathi lokho kuthathe impilo yami. Ngithola izicelo zezingxoxo nabezindaba ezivela kuwo wonke umhlaba, futhi abantu bangicela ukuthi ngize emicimbini yabo ngikhulume, futhi ngibe nabantu abangitshela ukuthi bafuna ukuthenga “amalungelo empilo” ami ukuzama ukuthola amadili e-movie. Ngiye ngaba nabantu engingabazi abazama ukuba umngani wami omkhulu kuFacebook, bese kuba nalolu hlobo lompristikazi we-voo-doo othole inombolo yami ngandlela thile, eshaya futhi eshaya futhi ethumela imiyalezo engami, ethembisa ukuthi uzongiphilisa. Lapho ngimgwema, wathi ngizomkhumbula embhedeni wami wokufa, ngifisa sengathi ngabe ngiyamvumela angisize. Kuyahlanya. Izingane zami ziyiphatha kahle kodwa azikunaki ukunaka - siwumndeni omncane futhi besilokhu sizama ukubhekana nokwaziwa kuzwelonke.
Kwesinye isikhathi kuyakhathaza ngezingcingo eziningi kanye nezicelo zezingxoxo noma imicimbi yokukhuluma. Ngasikhathi sinye, nokho, ngizibona manje sengibe neqhaza elikhulu engxoxweni ebiphuza iminyaka, kepha kusukela ngesinqumo sesinqumo ingxoxo isikhulu kakhulu. Ngizama ukunaka isicelo ngasinye kodwa angikwazi ngenxa yempilo yami futhi ngizama ukusiza ukunakekela izingane zami. Kepha ngizama ukwenza lokhu kube yinto ephambili. Ngifuna ukubona zonke lezi zikole ziyeka ukusebenzisa i-glyphosate, okokuqala eCalifornia, bese kuba yizwe lonke. Lowo umsebenzi wami omncane. Futhi njengoba kumangalisa, ngizizwa ngisekelwa kakhulu futhi nginamandla avela kubantu abaningi abangifinyelele. Ngizwile uthando nokuxhaswa ngabantu emhlabeni wonke futhi lokho kunginikeza umqondo omusha wokushayela nokuziphendulela. Abanye abantu bathumela izipho ezincane, ama-trinkets. Bangibhalela ngomdlavuza wabo. Omunye wesifazane wabhala ngomyeni wakhe nangendlela ashona ngayo. Ngingasho ukuthi ngithole izinkulungwane zezincwadi. Kuyasiza.
Abantu abaningi ngibuze ukuthi ngifuna ukwenzani ngempilo yami manje. Angicabangi ukuthi ngingu-superman. Ngidlula kulezo zikhathi ezincane lapho ikhanda lami liphansi futhi izindololwane zami ziguqe ngamadolo ngizibuza ngizokwenzenjani? Kepha uma ngikwazi ukuba nempilo enhle, ngingavumeli lokho odokotela bami abathi kuyisimo esibulalayo, uma ngingathola ukwelashwa futhi ngisondele ekwelashweni ngibe sengizibona ngenza izinto ezinhle. Ngingathanda ukuqala isisekelo. Futhi ngifuna ukwenza okuningi ngomculo wami nobuciko. Ngipenda ngamafutha noma nge-acrylic futhi ngenza imidwebo ethile yamalahle. Ngithanda nokubhala; Ngizinyathelisele izincwadi ezimbili - “Umbono Wami” nethi “The Perfect Front.”
Abanye abantu bacabanga ukuthi ngiyindoda ecebile, bakhuluma nami sengathi ngikhokhelwe vele, okuyinto engeyona iqiniso. Iqiniso ukuthi izikhalazo zingaqhubeka kahle esikhathini esidlule sokuphila kwami. Asikwazi ukugubha noma senze izinhlelo noma siye eholidini ngoba asinayo leyo mali. Ngithola isheke lokuphepha komphakathi manje njalo ngenyanga. Akuhlanganisi ngisho nezindleko zerenti. Abantu bazama ukungisiza, kepha ngiphukile kakhulu. Kuyathokozisa kwesinye isikhathi ukucabanga ukuthi singathola izigidi zamaRandi, kepha manje siyazi ukuthi asikho. Siphila impilo yemimoya eyisipoki.
Angiqiniseki nokuthi ngizokwazi kanjani ukuba yindoda ecebile. Ngingathanda ukuthenga indlu, okuthile okusondele ezikoleni zezingane zami, okuthile okuzobanika ukuphepha. Kepha kunezinto eziningi kakhulu ongazithenga. Angicabangi ukuthi kuningi kakhulu ongakwenza noma okufanele ukwenze ngezigidi zamaRandi ngaphandle kokuzama ukusiza abantu. Ngokuqondene nejaji elisika u- $ 289 million wehlela ku- $ 78 million, angikaze ngicabange ngaleyo $ 289 million njenganoma yini ezongena emaphaketheni ami. Ngangazi ukuthi kuzoba nemikhawulo yezomthetho yokuyishaya ngakho-ke angikaze ngiyicabange njengami. Angazi noma ngiyoke ngiwubone yini umklomelo wamajaji empilweni yami. Ngiyethemba ukuthi abafana bami bazokwenza lokho.
Kakhulu engikufunayo ukuthi amadodana ami, womathathu, azizwe sengathi anengubo yokuvikela eqinile futhi azi ukuthi ayanakekelwa. Ngifuna ukubakhombisa indlela enhle ngibanikeze nezinga lempilo elibavumela ukuthi bafunde, baqonde impilo namasiko nabantu. Ngiyethemba ukuthi ngelinye ilanga bayobheka emuva bese bethi, "Ubaba waqopha umlando wazimela wazimela nathi."
I-chemo yami ime ngoba kufanele ngihlinzwe kakhulu ngale nto abayichaze engalweni yami. Ngokusobala, yi-melanoma entsha. Futhi nginalobu buhlungu engibubiza ngokuthi “izindawo ezishisayo” onyaweni lwami nasengalweni, ngishisa isihlakala sami. Ngezinye izikhathi ngibabiza ngokuthi “izishisi.” Kepha kuyikho. Bengihlala ngicwebezela futhi ngingumfana omuhle - manje sengixakekile. Nginomuzwa wokuthi uma ugula, akufanele ukufihle noma kunjalo. Yabelana ngalo nomhlaba futhi mhlawumbe ungasiza othile.
Kuningi okwenzekayo, kodwa into ebaluleke kakhulu kimi ngabafana bami. Ngiyaziqhenya ngabafana bami. Ngiyakuzonda ukucabanga ngokufa. Ngisho noma ngizwa sengathi ngiyafa, ngimane ngizenze ngidlule kukho. Nginomuzwa wokuthi awukwazi ukunikela kuso, ukuxilongwa, isifo, ngoba-ke ufile ngempela. Angazihluphi ngefu lokufa, imicabango emnyama, ukwesaba. Ngihlelela impilo emnandi.
izibulala-zinambuzane Bayer AG, UCarey Gillam, UDan Goldstein, UDewayne "Lee" Johnson, glyphosate, Monsanto, umagazini i-Time